Codsiga Soo Jeedinta - Adeegyada Taakulaynta Dakhliga Hoose iyo Adeegyada - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Codsiga Soo-jeedinta - Adeegyada Guryeynta Dakhliga-Hoose iyo Adeegyada Taageerada
Codsiga Soo-jeedinta - Adeegyada Guryeynta Dakhliga-Hoose iyo Adeegyada Taageerada
Isbeddel La Xusi karo: Taariikhda xidhitaanka iyo waqtiyada ayaa la kordhiyay. Fadlan eeg faahfaahinta RFP ee la cusbooneysiiyay.
Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington (Ganacsiga) ayaa bilaabaya Codsigan Soo-jeedinta ah (RFP) si ay uga codsadaan soo-jeedin shirkadaha daneynaya kaqeybgalka mashruuc si loo siiyo guryo dakhligoodu hooseeyo iyo / ama adeegyada taakulaynta guryaha ee dakhligoodu hooseeyo oo ku yaal meel isku mid ah barnaamijyo kale oo taageeraya baahida carruurta, waayeelka ama dadka naafada ah haddii ay suurtagal tahay. Shirkadaha u qalma waa inay ku yaalliin xaafadaha Beacon Hill, Chinatown, ama xaafadaha Degmada ee Seattle.
Ganacsigu wuxuu damacsan yahay inuu bixiyo hal qandaraas (qandaraas) si loo bixiyo adeegyada lagu sharaxay RFP.
DHAQAALAHA SOO SAARKA: Julaay 29, 2021, 3 galabnimo Waqtiga Baasifigga, Olympia, WA
WAQTIGA WAQTIGA LAGU QAADAY HESHIISKA: Sebtember 1, 2021 - Juun 30, 2023
Codsiga UPDATED ee Soo -jeedinta (PDF)
Su'aalaha iyo Jawaabaha RFP 22-36704-001 (PDF)
Isuduwaha RFP: Emily Grossman
Maaddaama mugga dalabku badan yahay ee barnaamij kasta, jawaabaha dalabku dib ayey u dhici karaan dhowr maalmood lacagna lagama yaabo in la helo dhowr bilood. Sheegashooyinka waxaa loo bixiyaa sida ay u kala horreeyaan, ka dibna loo oggolaado. E-maylka oggolaanshuhu waa dammaanaddaada bixinta. Fadlan hubso inaad ku darto emayllada @ commerce.wa.gov liistada dirahaaga aaminka ah.
← Gobolku wuxuu ku boorinayaa milkiileyaasha iyo shirkadaha ka shaqeeya guryaha ganacsiga inay dib u eegaan liiska dhismayaasha cusub ee la soo dhejiyay oo ku xiran heerka XNUMXaad ee heerka waxqabadka dhismooyinka nadiifka ah ee Washington. Warbixintu waxay soosaaraysaa talooyin ku saabsan wax ka qabashada baahiyaha daryeelka caafimaad ee aan la daboolin ee kuwa hadda shaqeeya iyo kuwii hore ee goobta Nuclearka Nuclearka →